एघार विधामा आइसिटी अवार्ड हुने, अनलाइन नोमिनेशन शुरू काठमाडौं । सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा स्थापित आइसिटी अवार्डको पाँचौँ संस्करणको अनलाइन …. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/एघार विधामा आइसिटी अवार्ड हुने, अनलाइन नोमिनेशन शुरू काठमाडौं । सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा स्थापित आइसिटी अवार्डको पाँचौँ संस्करणको अनलाइन ….
एघार विधामा आइसिटी अवार्ड हुने, अनलाइन नोमिनेशन शुरू काठमाडौं । सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डका रूपमा स्थापित आइसिटी अवार्डको पाँचौँ संस्करणको अनलाइन ….
उनका अनुसार ११ विधाका अवार्डमध्ये इन्नोभेसन इन क्राइसिस रेसपोन्स आइसिटी अवार्ड र वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड थप गरिएका नयाँ विधा हुन् । स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड, राइजिङ स्टुडेन्ट आइसिटी अवार्ड विधा इन्नोभेसन, प्रडक्ट र स्टार्टअपसँग सम्बन्धित अवार्ड विधाहरू हुन्
ढोरपाटन बाढी पीडितलाई प्रदेश सरकारले प्रति परिवार १ लाख राहत दिने
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल भाद्र ११ गते बिहीबार; कस्तो छ तपाईको भाग्य र भविष्य हेर्नुस